Misy modely peloton samihafa ve? - Andiany
Tena > Andiany > Modely peloton - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Modely peloton - fanapahan-kevitra azo ampiharina
Misy modely peloton samihafa ve?
nyandianyNy bisikileta no voalohanymodely platana, miaraka amina endri-javatra somary lavalava raha oharina amin'ilay vaovao nohavaozinaMODELY. Fa, raha mitady aandianytraikefa ary te-hihary $ 600, ilay voalohanyandianytsy handiso fanantenana.
Benji Jones: 2 000 $ ity bisikileta ity ary manafika ny tontolon'ny bisikileta. Namidin'i Peloton io, izay heverina fa manana mpanjifa betsaka noho ny SoulCycle goavambe mihodina. Fa ny tena mampiavaka azy dia ny fahamoran'ny bisikileta, azonao atao ny maka kilasy fihodinana na avy aiza na aiza ary, raha ny filazan'ny orinasa, dia mahazo fanatanjahan-tena tsara kalitao amin'ny studio.
Tena tsara izany ankehitriny, fa tena mendrika ny hosoka ve izany? Mba hahalalako azy dia nahazo bisikileta peloton ho an'ny spin aho, nanao kilasy peloton 45 minitra isan'andro aho nandritra ny tapa-bolana, ary nanao ahoana izany? Eny, ndao lazaina fotsiny, mety tsy ho hitambatra intsony aho izao zavatra voalohany izao: Mba hahitana fa tsara ho an'ny fampihetseham-batana ho azoko, dia nitsidika ny mpanazatra ara-panatanjahantena Sean Kuechenmeister aho talohan'ny kilasiko voalohany. Sean: Antenaina fa ho hitanao manokana ny tena fitaizam-batanao manokana amin'ny bisikileta. Benji: Sean dia miasa ao amin'ny New York Sports Science Lab any Staten Island, ary eo no manombatombana ny fahombiazan'ny atleta matihanina.
Ary ankehitriny izaho, ny mpitsidika fahasalamana mahazatra anao. Tsara, tsara. Nanomboka tamin'ny fandrefesana ireo metrika fototra toy ny lanja sy ny tavy amin'ny vatana.
Ny manaraka dia ny fandrefesana tsy dia tsotra loatra; Mahatsiaro tena ho toy ny manao azy io aho, toy ny seza ejector. Masinina isokinetika io. Marefy ny tanjaky ny quadako.
Dia notsapainay ny tanjaky ny tongotra, Sean: Mitsambikina. Benji: fivezivezena, ary zavatra antsoina hoe drive hozatra. Sean: Toy izany koa no hitondranao ny habetsaky ny herin'ny herinaratra azonao avy amin'ny ati-doha amin'ny alalanao.
Ny hozatra dia tena toy ny nofo tsy misy dikany. Ny hozatra dia mamaritra ny fahombiazan'ny hozatra. - Fa ny fitsapana sarotra indrindra? Fatra iray amin'ilay antsoina hoe VO2 max.
Sean: Ny antony maha-zava-dehibe ny VO2 max amin'ny bisikileta dia refesin'ny fahaizan'ny vatanao mampiasa oksizena raisinao rehefa miaina ianao. Arakaraky ny fampiasanao ny oksizena no hampiakaranao bebe kokoa amin'ny vatanao manontolo ary arakaraka ny fahaizanao mivezivezy sy manao izay fanazaran-tena ataonao. Benji: nataoko ambany ny salanisa tamin'ny VO2 max tamin'ny 47 isan-jato, izay mahamenatra.
Saingy tamin'ny ankapobeny dia tsara endrika aho ary niaraka tamin'ny naotiko tao aoriako, tonga ny fotoana hitondrako fiara. Soa ihany fa tsy misy sarontava solika amin'ity indray mitoraka ity. Somary nibontsina ny fanombohana satria tsy tena nandeha tamin'ny bisikileta aho tamin'ny voalohany.
Tsy nahatsapa ny mozika fotsiny aho, toy ny taloha ihany, na, toa ny rock, tsy saika hitondra bisikileta hivoaka ho any amin'ny rock aho, lasa nandeha amina kilasy noraketina an-tsary aho ary noheveriko ho tena nahay tamin'izany. Tapaho ny fotoam-pianarana ary avy eo nojereko dia hitako fa teo amin'ny toerana faha-589 aho, araka ny eritreritro. Raha ny lazaiko dia olona manodidina ny 2.500 no tao amin'io kilasy io, izay nahatonga ahy hahatsapa ho salama antonony, izay tsara tanteraka. Efa manomboka mahatsapa izany ny quadako.
Tena afaka mahatsapa may aho anio, jereo ity. Toerana faha-2,136 amin'ny 10.000. Ny tiako holazaina dia tsy mahatsiravina! Reraka aho saika hatramin'ny voalohany, saingy nandeha haingana ny andro ary vetivety dia Wir ek aho.
Faly aho milaza fa nanao azy fito andro misesy! fa tsy hitako ny fandrosoana be toy izany, raha ny tena nanaintaina ahy aho, tena manomboka mahatsapa fanaintainana kely eo amin'ny ilako ankavanana fantatrao aho, raha ny marina dia mitovy daholo ny statiko ankehitriny toa ny taloha. ny diako voalohany. Nandoro kaloria 500 mahery isaky ny kilasy aho na inona na inona reraka nataoko teo amin'ny tsipika fahatongavana, saingy tsy hijanona aho, indrindra satria naminavina valiny mazava tsara tsy ampoizina i Sean. Sean: Mieritreritra aho fa raha very tavy ianao ary avy eo mety handoro ny tenanao ao anaty hozatra sasany, angamba ho hitanao fa miakatra amin'ny 143 ka hatramin'ny 141, 140, ianao, saingy antenaiko hiakatra ny fahatanjahanao, ary antenaiko fa io isa io mandeha amin'ny rariny ka hatrany amin'ny tsara amin'ny VO2 max.
Benji: nampitomboiko tamin'ny diako fahavalo. Raha tokony handeha hamonjy fodiana dia mody any amin'ny studio Peloton any Manhattan izay maka sary ilay kilasy. Nahaliana ahy ny hahita raha teo anoloan'ny mpampianatra aho ary nanatrika ilay izy Toa iray amin'ireo mety indrindra sy manintona indrindra any New York City izany.
Fotoana nahafinaritra. Andro iray talohan'ny fetin'ny mpifankatia ka maro ny hira fisarahana izay nahafinaritra. Fa raha ny hita, ny bisikileta rehetra dia ampifanarahana amin'ny kalibrera, noho izany ny fampisehoana amin'ny bisikiletako tao amin'ny studio dia tena hafa noho ny tamin'ny bisikileta ananako tao an-trano.
Mety nisy fahasamihafana 200 kaloria. Ka niezaka mafy kokoa aho tao amin'ny studio. Ny salan'isan'ny fo-ko dia 10% ambony noho ny tao an-trano, fa ny metatra amin'ny bisikiletako dia nampiseho ny fahaizako ary ny isan'ny kaloria no ambany indrindra hatrizay.
Fampitandremana tokoa, mety tsy hitovy ny mpanara-kaloria raha tsy mampiasa bisikileta mitovy isaky ny tapaky ny herinandro faharoa dia nanomboka nihatsara ny zava-bitako. Mahatsiaro ho tsara be aho Very fatin'ny vatana, mahatsapa fa ny tongotro dia mety matanjaka arivo heny. Antenaina fa izany no izy.
Izaho koa dia namaky kaloria 600 tao anaty diany iray androany izay midika hoe hihatsara aho amin'ny diako mankany amin'ny tanjaky ny bisikileta. Inona izany, dia mankany amin'ny tanjaka? Fanamarihana: raha tokony hitsikera an'i Peloton hatramin'ny farany aho dia tsy ny kalitaon'ny fampiofanana
Mpampianatra: Rehefa mieritreritra zavatra miendrika angovo ianao Benji: Io ilay fiteny ampiasain'ny mpampianatra handrisika azy. Mety ho zavatra manokana izany, saingy mahatsiaro tena tsy azo antoka fotsiny. Ity dia lesona fanazaran-tena. tsy misy fitsaboana ihany. andro vitsivitsy taty aoriana dia tonga ny fotoana niandrasako ny farany! woo! Kilasy 14! eny, mahatsapa tena tsara ny vita angamba satria nahatratra ny tanjoko aho, ny ampahany satria faly be aho fa tsy mahatsiaro reraka loatra ary tsy mitaingina bisikileta isan'andro hanao zavatra betsaka isan'andro.
Andao jerena, fampihetseham-batana 14, 10 1/2 ora, 194 kilaometatra, kaloria 7,745, izany no fampisehoana tsara indrindra vitako. Nopotehiko ihany koa ny kaloria 600 tao anatin'ny diako iray androany izay midika fa tsara kokoa aho, ary hitanareo fa nanomboka matanjaka be aho ary avy eo nilentika kely ary avy eo nanomboka niasa indray ny ampitso, niverina aho mba hijery ny fanadinako ny fanaraha-maso. ny laboratoara. Sean: ny refinao voalohany dia 143.5.
142 ianao androany miaraka amin'ity teboka aotra ity, fa ny vatan'ny vatanao mahia, ny hozatrao, ny taolanao, fantatrao fa 125.2 ny taolana nifandray tamin'ny voalohany. Ny fanindroany dia 125.4 ka matavy daholo ny very.
Nahazo ny hozatrao ianao. Raha ny marina dia nahazo 0,2 pounds ny masin'ny hozatra ianao nandritra izay fotoana rehetra izay - Mahaliana fa ny hozatra vaovao azoko dia toerana iray ihany: ny tongotro havia.
Tadidinao ve ny fanaintainan'ny lohaliko havanana noresahiko? namboarina tamin'ny fianteherana bebe kokoa amin'ny ilako havia rehefa mandeha pedal, izay vokatr'izany dia manangana hozatra eo aho. Tena very lanja manerana ny vatako aho. Sean: nesorinao ny vatany.
Very lanja teo amin'ny sandrinao ankavia ianao ary nampihena ny lanja teo amin'ny sandrinao ankavanana. Benji: Ary izany dia satria karazana hetsika iray fotsiny no nataoko isan'andro, fa ny fiovana lehibe indrindra dia ny an'ny VO2 max-ko. Mpanazatra: Ka io no voalohany, ary ity no vaovao, izay 79% monja no isany ankehitriny.
Sinematographer: Tsy mampino izany! Dean: 47 ka hatramin'ny 79. Benji: Ka tsara noho ny ankamaroan'ny olona aho? Sean: Ie. Ratsy noho ny nahazoan'ny ankamaroan'ny olona tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny olona ianao.
Benji: Wow. Mahagaga izany wow! OK, ka hozatra bebe kokoa amin'ny tongotro havia, kely kokoa na aiza na aiza, ary fiaretana bebe kokoa. Ahoana ny amin'ny hery? Sean: Tena very hery tokoa ianao amin'ny resaka tanjaka amin'ny herin'ny aerobic, fa raha ny fahaizan'ny anaerobika, ny rafitry ny vatantsika izay mampiasa siramamy bebe kokoa dia mampiasa glycogen ampiasainay hananganana tanjaka sy tanjaka hamokarana, tena nihena tokoa ianao.
Benji: Ary raha ny fiezahana hahatakatra ireo isa ireo mandritra ny tapa-bolana, fiovana lehibe ve izany? Sean: Oh eny, azo antoka. Heveriko fa ny ankamaroan'ny dokotera dia manoro hevitra fa ny kilao isaky ny kilao sy ny tavy ampahefatry isam-bolana dia taha mahasalama amin'ny fahaverezan'ny tavy, noho izany dia lavitra be ianao, ka mieritreritra aho fa raha izao no notohizanao dia mety ho very ianao matavy raha afaka manamboatra hozatra bebe kokoa ianao, saingy amin'ny fotoana sasany dia hisy ny fotoana izay hidina ny fiverenana, izay tsy maintsy manova zavatra amin'ny mahazatra isika. Benji: Roger, OK.
Sean: Tsara izany nandritra ny tapa-bolana, saingy heveriko fa tsy maharitra izany amin'ny ho avy. Benji: OK, ary zavatra tsara izany, satria ny hevitra momba ny bisikileta dia efa mahatsiravina sahady. Oh, raha mandeha indray aho mila mihena ary mihazakazaka eny amin'ny tendrombohitra misy vola, matoky aho fa ho ampy ny roa herinandro amin'ny bisikileta mahery tahaka izao.
Inona no maha samy hafa ny bisikileta peloton?
Ny tena izyBisikileta Pelotonmanana rafi-peo 2 x 10 watt, raha nyBisikileta PelotonPlus dia manana fantsom-peo stereo miatrika eo alohan'ny 2.2, ary woofera miatrika 2.2 any aoriana. Azonao atao koa ny mampiasabisikiletamiaraka amina écouteur tsy hanelingelina ny ankohonanao sy ny mpiara-monina aminao.
Ny areti-mandringana dia nahatonga ny hevitra hanao fanatanjahan-tena ao an-trano amin'ny ambaratonga lehibe. Ary mba hampitomboana avo roa heny ny lazan'ny bisikiletany voalohany dia natombok'i Peloton ny bisikileta tamin'ny fararanon'ny taona 2020. Nefa amin'ny $ 600 mihoatra ny teo alohany, mendrika ve izany? Bike + (ding) nanomboka tamin'ny fararano 2020.
Ary io dia dikan-teny lasopy vita tamin'ny bisikileta tany am-boalohany, misy efijery lehibe kokoa izay mihodina, rafitra fanamafisam-peo nohatsaraina, ary lakolosy sy sifotra vitsivitsy hafa natao hanatsarana ny traikefa Peloton. Ka ny tsy fitovizany dia ny bisikileta + $ 600 lafo kokoa, ka ny vidiny ifotony dia $ 2,495 ary ny bisikileta dia $ 1,895. Iray amin'ireo fahasamihafana lehibe indrindra ny efijery mikasika.
Ny Bike + dia manana efijery lehibe kokoa, 23.8 santimetatra mifanohitra amin'ny 21.5 santimetatra an'ny voalohany. ary mihodina izy.
180 degre ankavanana havanana 180 degre ankavia. Ary eo no hanamorana ny tetezamita manomboka amin'ny fiofanana bisikileta mankany amin'ny fanazaran-tena. Hitanay fa somary tery kely ny orientation ny écran ary somary avo loatra sy mihodina izy io, nahatratra ny tanana lebars io.
Misy rafitra fanamafisam-peo nohatsaraina. Rafitra famaritana avo be misy mpandahateny efatra. Ny Bike + dia manana fakantsary an-tsary 8 megapixel misy fonony manokana.
Ny fakana sary dia manana fakantsary 5 megapixel tsy misy fonony tsiambaratelo. Ny tsy fitoviana kely, ny fahasamihafana Bike + dia misy bokotra hanamboarana ny haavon'ny seza sy ny kitapom-batsy mifanohitra amin'ny tantana ratchet toa ny bisikileta. Ny Bike + dia tafiditra ao amin'ny Apple GymKit, ahafahanao mandrindra ny Apple Watch mivantana amin'ilay fitaovana.
Izy io dia mirakitra ny dianao ary mampiseho koa ny fitepon'ny fonao eo amin'ny efijery ambonin'ilay fiambenana. Ny Bike + koa dia manana endri-javatra antsoina hoe Auto Follow, izay manamboatra azy ho azy ny fanoherana ny bisikileta mifototra amin'ny mombamomba ny mpampianatra sy ny tanjona manokana ary ny metika nangonin'ny bisikileta tamin'ny diany teo aloha rehefa manao izany ianao. Misy fofona mandositra raha mijanona amin'ny fanoherana avo dia avo ianao ary te hivoaka.
Mitovy ny habe. Manodidina ny efatra metatra ny halaviran'ny bisikileta. Ny lanjany farany ho an'ny bisikileta roa dia 297 pounds.
Ny halavany dia manomboka amin'ny 4'11 'ka hatramin'ny 6'4' Mitentina 39 $ isam-bolana ihany ny vidiny. Ary mila ny kiraro mitovy amin'izany koa ianao. Heveriko fa miankina betsaka amin'izay tianao hahatongavan'ny bisikiletanao izany, angamba kokoa ny zavatra tadiavinao avy amin'ny zavatra niainan'ny peloton.
manao kaloria mandoro hatsembohana
Ny fiasan'ny roa tonta dia tena mitovy. Ny atiny azonao, ny fampihetseham-batana, dia mitovy amin'ny bisikileta roa. Noho izany dia tsy diso anjara na inona na inona ianao momba ny karazana fampihetseham-batana na ny karazana fampihetseham-batana azonao.
Raha maniry efijery mihodina ianao na maniry ny hanao ilay fitetezana ho anao ny bisikileta dia heveriko fa vita tsara. Tsy haiko raha mila mivoaka haka ny bisikileta + ianao raha efa manana bisikileta. Raha tsy te hividy bisikileta ianao, dia azonao atao ny mahazo ny rindrambaiko Peloton amin'ny $ 13 isam-bolana, izay manana karazana fampihetseham-batana mitovy, ny fampihetseham-batana, yoga, tanjaka azonao jerena amin'ny fitaovana hafa - bisikileta hafa , ho an'ireo manana teti-bola mafy izay tsy te-hanolo-tena amin'ny bisikileta + na bisikileta.
Izahay dia nanandrana izany tamin'ny bisikileta roa ary nahita fahombiazana tamin'izany. Tsy mitovy ny zavatra niainany fa afaka manome tsiro ny mitaingina ny peloton- Package. Salama, Ingrid avy amin'ilay lahatsoratra.
Ohatrinona ny peloton amin'ny herintaona?
andianydia lasa nanjary anarana lehibe tokoa tamin'ny fanatanjahan-tena niaraka tamin'ireo mpampiasa 1,4 tapitrisa, ary ilay mpanakorontana dia nahita fitomboana lehibe, na dia mihabe aza ny fatiantoka. Notaterina 915 tapitrisa dolara ny vola azo tamin'ny fiscal 2019TAOM-mifarana amin'ny volana Jona, raha ampitahaina amin'ny $ 435 tapitrisa amin'ny 2018 ary $ 218.6 tapitrisa amin'ny 2017.
Azonao atao ve ny mijery an'i Netflix amin'ny peloton?
Toy nyiSIKAfitiavana binge-Topy Maso EranMampalahelo ny Office, fa tsy misy fomba hampifandraisana ilayandianyBisikileta amin'ny fampiharana hafa toa nyNetflix.Izahay dia manaomanantena ny hitondra an'ity endri-javatra ity amin'nyandianyBisikileta amin'ny ho avy.
Azoko atao ve ny mijery an'i Netflix amin'ny peloton?
Tahaka ny itiavantsika azyTopy Maso EranMampalahelo ny Office, fa tsy misy fomba hampifandraisana ilayandianyBisikileta amin'ny fampiharana hafa toa nyNetflix. iSIKAAzamanantena ny hitondra an'ity endri-javatra ity amin'nyandianyBisikileta amin'ny ho avy.
jersey bisikileta primal
Tsara tahaka ny peloton ve ny Echelon?
Raha liana amin'ny fandaka ny vodin'akanjo any amin'ny kilasy mitovy amin'ny studio ianao sy ny fitsangantsanganana mahery vaika, nyandianytsara. Raha vao manomboka ianao na vao manomboka mianatra, na mikasa ny hifikitra amin'ny fanazaran-tena sy ny mozika anao indraindray, nyEchelonangamba lalao tsara kokoa.
Azonao atao ve ny mandefa an'i Netflix amin'ny peloton?
Toy nyiSIKAtia mijery binge The Office, indrisy, tsy misy fomba fampifandraisana ilayandianyBisikileta amin'ny fampiharana hafa toa nyNetflix.Izahay dia manaomanantena ny hitondra an'ity endri-javatra ity amin'nyandianyBisikileta amin'ny ho avy.
Tsara kokoa noho ny peloton ve ny bisikileta NordicTrack?
Ho ahy manokana, ny fitambaran'ny fanaraha-maso ny fitongilanana, ny sarintany an-dàlana ary ny toe-javatra misy ny fanoherana voafehin'ny mpampianatra raha ao am-pianarana mivantana no manosika nyNordicTrackmialoha nyandiany, fa samy tsara avokoabisikiletaizany dia tena hanampy anao hanana endrika, hiala voly ary hijanona ho mazoto amin'ny fotoana iray.10.30.2020
Afaka mahita mpitaingina hafa ve ianao amin'ny peloton?
Miaraka amin'ny takelaka vaovao Here Now an'ny Leaderboard,afaka mahita ianaoiza nomitainginamiaraka amin'nyianareoamin'ny kilasy On-Demand, na aiza na aizaizy ireoao amin'nymitaingina. Sivano tsotra fotsiny ny Leaderboard anao manomboka amin'ny 'All Time' ka hatramin'ny 'Here Now' mankanyJEREO NYiza koamitainginaamin'nyianareo.05.05.2018
Fa maninona ny peloton no tsara kokoa noho ny echelon?
Ny maha samy hafa ny fanoherana ataon'ireny bisikileta ireny dia ny tsirairayEchelonbisikileta manolotra ambaratonga 32 fanoherana, nyandianymanolotra ambaratonga 0-100. Ny fanoherana nyEchelonbisikileta matetika no ho bebe kokoanoho nyampy ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​fa nyandianymamonjy dia somary malama ihany.
Inona no modely ananan'i peloton?
Ny maodelim-pandraharahana Peloton dia mifototra amin'ny fidiram-bola telo, izany hoe Connected Fitness Products, Apparel, ary koa ny vola miditra amin'ny Subscription. Andao hiroboka lalindalina kokoa amin'izy ireo amin'ny fizarana manaraka. Ny orinasa dia mivarotra vokatra fanazaran-tena roa.
Iza amin'ny bisikileta Peloton tsara indrindra no vidiana?
Ny Peloton Bike no maodely Peloton tany am-boalohany, misy endri-dàlana somary lavalava raha oharina amin'ilay maodely nohavaozina vaovao. Saingy, raha mitady traikefa Peloton ianao ary te hanangona $ 600 eo ho eo, dia tsy handiso fanantenana ny Peloton tany am-boalohany.
Ohatrinona ny isan'ny mpikambana ao amin'ny peloton isam-bolana?
Ny fandoavam-bola isam-bolana mifototra amin'ny 0% APR mihoatra ny 39 volana, miankina amin'ny fahazoana. Ny mpikambana ao amin'ny Peloton All-Access dia misaraka amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny All-Access $ 39 / volana takiana amin'ny fonosana bisikileta rehetra. Tsy misy fanoloran-tena. Miato na manafoana amin'ny fotoana rehetra. Mamorona profil ho an'ny olona rehetra ao an-tranonao amin'ny Bike sy ny Peloton App. Hamantatra bebe kokoa. Ny fameperana ny taona sy ny habe